Sidee Loogu Dhaqangeliyaa Chatbot-ka Ganacsigaaga | Martech Zone
Isniin, February 26, 2018 Axad, Maarso 4, 2018 Paul Chaney
Wada hadalada, barnaamijyadaas kumbuyuutarka ah ee shabahaya wada hadalka aadanaha adoo adeegsanaya sirdoonka macmalka ah, ayaa beddelaya sida dadku ula falgalaan internetka. Maaha wax lala yaabo in barnaamijyada lagu sheekeysto loo tixgeliyo biraawsarayaasha iyo sheekooyinka cusub, websaydhada cusub.
Siri, Alexa, Google Now, iyo Cortana dhammaantood waa tusaalooyin lagu sheekeysto. Facebook-na wuxuu furay Messenger, wuxuuna ka dhigayaa oo keliya barnaamij laakiin wuxuu ka dhigan yahay barxad ay horumariyayaashu ku dhisi karaan gebi ahaanba nidaamka deegaanka ee bot.
Chatbotyada waxaa loogu talagalay inay noqdaan kaaliyaha kama dambaysta ah ee kama dambaysta ah, kaa caawinaya inaad ku guuleysato hawlo u dhexeeya ka jawaab celinta su'aalaha, helitaanka jihooyinka wadista, kor u qaadista heerkulka gurigaaga caqliga badan, iyo inaad ku ciyaarto heesaha aad ugu jeceshahay. Heck, yaa garanaya, maalin maalmaha ka mid ah xitaa waxay quudin karaan bisaddaada!
Wadahadal loogu talagalay Ganacsiga
In kasta oo khadadka loo yaqaan 'chatbots' ay jireen tobanaan sano (taariikhdii ugu horreysay ee soo noqota 1966), shirkaduhu waxay dhowaan bilaabeen inay u diraan ujeeddooyin ganacsi.
Noocyada ayaa isticmaalaya sheekaysiga si loo caawiyo macaamiisha siyaabo kala duwan: helitaanka badeecadaha, hagaajinta iibka, saameyn ku yeelashada go'aamada wax iibsiga, iyo kor u qaadista ka qeyb qaadashada warbaahinta bulshada, in la magacaabo dhowr. Qaarkood waxay bilaabeen inay ku daraan iyaga oo qayb ka ah shaxda adeegga macaamiisha.
Hadda waxaa jira bots cimilada, wargeysyada wararka, kaydka maaliyadeed ee shaqsiyeed, jadwalka jaangooyooyinka, bots-hailing bots, bots nafta badbaadinta, iyo xitaa bots saaxiibtinimo shaqsiyeed (maxaa yeelay, waad ogtahay, dhammaanteen waxaan u baahanahay qof aan la hadalno, xitaa haddii ay tahay bot) .
A waxbarasho, oo ay sameeyeen Opus Research iyo Nuance Communications, waxay ogaadeen in boqolkiiba 89 macaamiisha ay rabaan inay wadahadal la yeeshaan kaaliyeyaasha farsamada si ay si dhakhso leh u helaan macluumaadka halkii ay ka raadin lahaayeen bogagga internetka ama barnaamij moobiil ah kaligood.
Xukunka ayaa kujira - dadku waxay qotaan buugaag!
Chatbot loogu talagalay ganacsigaaga
Weligaa ma tixgelisay inaad u hirgeliso chatbot ganacsigaaga?
Waad awoodaa. In kasta oo laga yaabo inaad ka fikirto, ma ahan wax cakiran. Waxaad ku abuuri kartaa bot aasaasi ah daqiiqado gudahood adoo adeegsanaya qaar ka mid ah ilaha hoos ku taxan.
Waa kuwan qaar ka mid ah kheyraadka aan kugula talineyno oo aan u baahnayn lambar sireed:
Dareemo - Botsify waxay kuu oggolaaneysaa inaad dhisto Facebook Messenger chatbot bilaash ah iyada oo aan wax lambar ah lagu qorin. Codsiga kaliya wuxuu ubaahan yahay xoogaa talaabooyin ah si aad uhesho bot-kaaga oo shaqeynaya. Websaydhku wuxuu sheegayaa inuu garaaci karo Chatfuel waqtiga loo baahan yahay: shan daqiiqo oo keliya marka la eego kiiska Botsify, taasna waxaa ku jira jadwalka farriinta iyo Analytics. Waa lacag la’aan fariimaha aan xadidneyn; qorshayaasha qiimayaashu waxay bilaabmayaan markaad dhexgaliso barnaamijyada iyo adeegyada kale.
Chatfuel - Samee sheeko adigoon codeyn - taasi waa waxa Chatfuel kuu saamaxaya inaad sameyso. Sida laga soo xigtay websaydhka, waxaad ku bilaabi kartaa bot toddobo daqiiqo oo keliya. Shirkaddu waxay ku takhasustay soo saarista sheekooyinka loogu talagalay Facebook Messenger. Iyo waxa ugu fiican ee ku saabsan Chatfuel, ma jiraan wax kharash ah oo lagu isticmaalo.
La beddeli karo - La beddeli karo waa madal wada hadalka sirdoonka ee shirkadda loogu talagalay abuuritaanka dareen macquul ah, dalab, waaya-aragnimo otomaatig ah oo ku saabsan farriin kasta ama kanaalka codka.
fakadaan - Adiga oo ku dhexjira boggaaga, wadahadal kastaa wuxuu noqon karaa beddelaad. Halkii laga heli lahaa suuq-geynta dhaqanka iyo iibinta ee ku tiirsan qaababka iyo la socoshada, Drift wuxuu ku xiraa ganacsigaaga hogaaminta ugu fiican waqtiga-dhabta ah. LeadBot waxay uqalmaysaa booqdayaashaada bogga, waxay cadeyneysaa iibiyaha iibinta ay tahay inay lahadlaan kadibna buugaagta kulan. Looma baahna foomam.
gupshup - Madal fariin xariif ah oo loogu talagalay dhismaha khibradaha wada hadalka
ManyChat - ManyChat waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto Facebook Messenger bot loogu talagalay suuqgeynta, iibka iyo taageerada. Waa wax fudud oo bilaash ah.
MobileMonkey - Samee sheeko loogu talagalay Facebook Messenger daqiiqado gudahood iyada oo aan loo baahnayn lambar sir ah. MobileMonkey chatbots waxay si dhakhso leh u bartaan inay weydiiyaan oo ay ka jawaabaan su'aal kasta oo ku saabsan ganacsigaaga. Tababbarkaaga Daanyeerkaaga 'Daanyeer' ayaa u fudud sida dib-u-eegista iyo ka jawaabista su'aalaha dhawr maalmood oo kasta.
Haddii aad rabto inaad iskudaydo inaad iskudhiso bot adiga oo isticmaalaya madal, Majaladda Chatbots wuxuu leeyahay cashar cadeynaya waxaad ku sameyn kartaa ilaa 15 daqiiqo.
Istaraatijiyadaha Horumarinta Chatbot
Haddii aad haysato ilaha horumarinta, waxaad sidoo kale la soo bixi kartaa sheeko xariirtaada adoo adeegsanaya aalado leh habeyn dabiici ah oo dabiici ah, sirdoon farsamo, iyo barashada mashiinka oo diyaar ah:
Amazon Lex - Amazon Lex waa adeeg loogu talagalay dhisida is-dhexgalka wada sheekaysiga ee codsi kasta iyadoo la adeegsanayo cod iyo qoraal. Amazon Lex waxay siisaa shaqooyinka barashada qotada dheer ee aqoonsi hadalka otomaatig ah (ASR) si loogu badalo hadalka qoraalka, iyo fahamka luqada dabiiciga ah (NLU) si loo aqoonsado ujeedka qoraalka, si ay kuu suuro gasho inaad ku dhisto barnaamijyo leh khibradaha isticmaalaha aadka u xiisaha badan iyo sheekaysiga nolosha. isdhexgalka.
Qaab dhismeedka Azure Bot - Dhis, xiriiri, deji, maamulna khamaarijyo caqli badan si ay si dabiici ah ula falgalaan isticmaaleyaashaada degel, barnaamij, Cortana, Kooxaha Microsoft, Skype, Slack, Facebook Messenger, iyo inbadan. Si dhakhso leh ugu biloow jawi dhisme bot oo dhameystiran, intaad bixinaysid waxaad isticmaalayso oo keliya.
Wadahadalka - Bots-yada badankood waxay u baahan yihiin tababar iyo Chatbase waxaa loo dhisay si gaar ah hawshan. Si otomaatig ah u sheeg dhibaatooyinka jira oo hel talo soo jeedin ku saabsan sida ugu dhakhsaha badan ee aad ugu fiicnaato qalabka mashiinka.
Dialogflow - Sii dadka isticmaala siyaabo cusub oo ay kula falgalaan badeecadaada adoo dhisaya cod soo jiidasho leh iyo isweydaarsi qoraal ku saleysan oo ay ku shaqeyso AI. La xiriir isticmaaleyaasha kaaliyaha Google, Amazon Alexa, Facebook Messenger, iyo aalado iyo aalado kale oo caan ah. Dialogflow waxaa taageeray Google waxayna ku socotaa kaabayaasha Google, taas oo macnaheedu yahay inaad ku qiyaasi karto malaayiin isticmaale.
Madal Facebook Messenger - Bots for Messenger waxaa leh qof kasta oo isku dayaya inuu dadka kula xiriiro taleefanka gacanta - iyadoo aan loo eegin sida ay u weyn tahay ama u yar tahay shirkaddaada ama fikraddaadu, ama dhibaatada aad isku deyeyso inaad xalliso. Haddii aad dhiseysid barnaamijyo ama khibradaha si aad ula wadaagto cusbooneysiinta cimilada, u xaqiijiso boos celinta hoteelka, ama aad u dirto rasiidhada iibsiga dhowaan, bots-ka ayaa kuu suurta gelinaya inaad ahaato qof shaqsiyeed, firfircoon, oo aad u habayn badan sida aad ula macaamilayso dadka la jooga.
IBM Watson - Watson oo ku jirta IBM Cloud wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku dhex-darto AI-da adduunka ugu awoodda badan arjigaaga oo aad kaydiso, tababarto oo aad ku maamusho xogtaada daruuraha ugu amniga badan.
LUIS - Adeeg ku saleysan barashada mashiinka si loogu dhiso luqadda dabiiciga ah barnaamijyada, bots, iyo qalabka IoT. Si dhakhso leh u samee shirkad diyaar u ah, moodello caadiya oo si joogto ah u hagaajiya.
Pandorabots - Haddii aad dooneysid inaad kuxirxirto geekaga oo aad dhisto shebekad ubaahan codeyn yar, markaa goobta ciyaarta Pandorabots adiga ayaa kuu ah. Waa adeeg bilaash ah oo adeegsanaya luqad qoraal ah oo la yiraahdo AIML, oo ​​u taagan Luqadda Aqoonsiga Cilmiga Artificial. In kasta oo aynaan iska dhigaynin inay taasi fududahay, websaydhku wuxuu bixiyaa cashar tallaabo-tallaabo ah adoo adeegsanaya qaab-dhismeedka AIML si aad u bilowdo. Dhanka kale, haddii dhisida buugaagta lagu sheekeysto aysan ku jirin liiskaaga "wax-qabasho", Pandorabots ayaa ku jiri doona mid kuu dhis. Kala xiriir shirkadda qiimaha.
Fure u ah adeegsiga wax ku oolka ah ee loo yaqaan 'chatbot' waa in la hubiyo inay sare u qaadaan khibrada macaamiishaada. Midna ha dhisin maxaa yeelay waa isbeddellada kulul. Samee liistada qaababka ay uga faa'iideysan karto macaamiishaada, haddii aad ku qanacdana chatbot waxay u adeegi kartaa ujeedo waxtar leh, dib u eeg kheyraadka kor ku xusan si aad u hesho midka adiga kugu habboon.
Tags: aiamazon lexsirdoonka macmalqaab-dhismeedka 'azure bot'botsifywada sheekaysiga botjoornaalka chat botchatbasesheekooyinkasheekaysiga ganacsigasheekadala beddeli karoCortanawada hadalmiyigiifacebook facebookmadal farriinta facebookgoogle botgupshupsida looibm watsonfahamka luqaddaLuisbarashada mashiinkabadanmicrosoft luisKooxaha Microsoftmoobiilprocessing langage dabiici ahnlppandorabotsSkypedebcin
Paul Chaney waa qoraa shaqaale ah oo ku saabsan Isbedelada Ganacsiga Yaryar. Wuxuu daboolayaa wararka warshadaha, oo ay ku jiraan wareysiyada lala yeesho maamulayaasha iyo hoggaamiyeyaasha warshadaha ee ku saabsan wax soo saarka, adeegyada, iyo isbeddellada saameynaya ganacsiyada yaryar. Isagu waa ruug cadaa ka ganacsada internetka oo 20 sano khibrad u leh ka caawinta ganacsiyada yar yar barashada sida loogu isticmaalo shabakada ujeedooyin suuq geyn. Markii hore, wuxuu ahaa tifaftiraha Web Suuqgeynta Maanta iyo tifaftire muddo dheer wax ku biirin jiray Farsamooyinka Iibsiga.
Tartamayaashaada waxay ku shaqeynayaan Istaraatiijiyada IoT ee ku aasi doonta
Aug 23, 2019 at 2: 23 AM
Shaqo wacan Paul! Xaqiiqdii, sheekooyinku waxay noqdeen hub cusub oo suuq-geyn suuq-geyn ah oo loo soo bandhigo inay khibradda macaamiisha u qaadaan heer cusub. Waxaan marwalba xiiseeyaa inaan waxbadan ka ogaado chatbootyada iyo AI, waana inaan idhaahdaa haasaaweyaashan iyo astaamahoodu weligood igama dhicin inay i yaabiyaan. Waxaan dhawaan booqday baloogyo la mid ah oo sharraxaya noocyada kala duwan ee sheekaysiga iyo sida ay u beddelayaan adduunka suuqgeynta. Waa kuwan xiriiriyeyaasha. (https://www.navedas.com/the-chatbot-marketings-new-secret-weapon/ iyo https://mobilemonkey.com/blog/best-chatbots-for-business/)